Baled-xaawaa Barwaaqo iyo Baraaraba Gaartay Fallo “ M Shaafici Cabdinuur “ – Kismaayo24 News Agency
Baled-xaawaa Barwaaqo iyo Baraaraba Gaartay Fallo “ M Shaafici Cabdinuur “
by admin 21st November 2015 21st November 2015 0121
Ugu Horeyn waxaa mahad u sugnaatay Alle Subxaana Watacaalaa ee inoo sahlay inaan Waxqorno waxna akhrino, nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaato rasuulkeena Muxamed Caleyhi Salaatu Wasalaam.
Intaas kadib aan bal inyar ka dhaho sababta igu kaliftay qaadashada qalinkan aan wax kagaqoraayo Degmada Istraatiijiga ah ee Baledxaawo,
Soomaalidu iyada cadow isu ah cadowgeedane waa u cadow sidaas darteed Magaaladan Istaaraatiijiga ah ayaa leh Cadow farabadan oo isugu jira Sokeeye iyo shisheeyaba, waxay magaaladan kamid tahay magaalooyinka soomaaliya uu kasoo galo dakhliga ugu balaaran, taas badalkeedane ma ahan mid inbadan oo inaga mid ah ay ku baraarugsanyihiin.
Degmada baledxaawo waxay dhacdaa Konfur Galbeed Soomaaliya, aan sikale u dhahee Gobolka labaad ee Ugu weyn Soomaaliya ee Gedo ayey dhacdaa Jihadiisa Waqooyi, waxay Xadbeenaad lawadaagtaa Dalalka Kenya iyo Itoobiya, waa Magaalo Sadex Xagal ku taalo, leh ilo dhaqaale oo farabadan, oo uu ugu horeeyo ganacsiga noocyadiisa kala duwan.
Waxay Caasimadda Dalka ee Muqdisho u jirtaa Masaafo kabadan 500km, Xarunta Gobolka ee Garbaharayne waxay u jirtaa 80km, dhul ahaan baledxaawo waxay ku taalaa dhul siman sikale hadii loo eegane noqon kara dhulsare, ciid ahaan Magalada waxay kamid tahay Meelaha ugu carada wanaagsan Gobolka Gedo,
Degmadan Baledxaawo waxay caan ku tahay ganacsiga oo isaga kala goosha Dalalka Kenya iyo itoobiya oo mid walbaa uu goonidiisa xiriir ganacsi ula leeyahay, Degmooyinka Mandhera oo Kenya ah iyo Suufka oo Itoobiya ah ayey ood wadaag yihiin, waxaana marka aad sii dhuuxdo Xiriirka Ganacsi ee kala dhaxeeya labadaasi degmo uu yahay mid heerkiisu aad u sareeyo.
Magaalada waxaa igu maqaalo ah Xilligii Dowladii Dhexe ee soomaaliya ineey aheyd Degmada Sadexaad ee dakhliga ugu badan uu kasoo gali jiray Dowladii Kacaanka waxaana xaga kasareynta Dhaqaalaha kaga horeeyey Caasimadda Mqudisho iyo Magaalo Xeebeedka Kismaayo sida aan kasoo xigtay Khubarada dhinaca Ganacsiga ee lasoo shaqeyey Dowladdi Dhexe.
Magaalada iyo guud ahaan gobolka malaha dhulbadeed ama Sikale aan u dhehee Meelo Dekado lagasameyn karo ama lehba, Baledxaawo ayaana Gedo u ah iyo Guud ahaan qeybo badan ookamid ah Koonfurta Soomaaliya Furdada ama Dekad Biriyeed Misaankeeda Dhaqaale leh.
Magaalada wixii ka dambeeyey Burburkii Dowladii Dhexe kadib waxay hoy iyo marti u noqotay Fowdo, Qalalaase, Jihawareer siyaasadeed, iyo tan ugu daran oo ah ineey aheyd meel Inbadan ay ka dhaceen dagaalo sokeeye, mana yeelan maamul gacan bir ah ku qabta magaalada una jiheeya dhinaca san, wixii ka horeeyey sanadkii 2007-dii Xilligaas oo maamul kayimid Bulshada rayidka oo uu Hogaaminayay Gudoomiye Axmed maxamed Yuusuf “Barkuus” allaha u naxariistee uu ka dhismay Magaalada.
Maamulkii Mudane Barkuus ayaa ahaa Maamul inbadan oo bulshada deegaanka ah aan wali xasuustooda ka gu’in ,iyagoo ku xasuusto Maamul wanaagii, iyo Musuq la’aantii uu degmada ku maamulayay Mudadii uu Xilkaasi hayay oo lagu qiyaasay sanad iyo Xoogaa,iyadoo wixii xilligaasi ka danbeeyeyne Maamulka Magaalada ay lawareegeen Xarakada Al-shabaab.
Maamulkii Shabaabka ee Magaalada oo ka duwanaa guud ahaan Maamuladii Magalada soomaray ayaa Degmada katalinayay muddo kusiman afar Sanadood iyado kasaaritankii shabaab ee Magaalada kadibne Magaaladu ay markale marti galisay Maamulo aan sal fadhin kuna imaan rabitaan bulsho, balse kuyimid sankagalis iyo riixitaanka quwado shisheeye oo qeyb ka ahaa hanaankii Shabaab Looga saaray Magaalada Baledxaawo.
Sanado qas iyo Fowdo Maamul liito uu sabab u ahaa oo ay markale baledxaawo martigalisay waxaa Magaalada tiro ka dhowr jeer ka dhacay Dagaalo u dhaxeeyey Maleyshiyaad kala taabacsanaa Ahlusuna waljamaaca iyo Maamulka KMG ah ee Jubba oo dhamaantood u abaabulnaa qaabab qabiil hase ahaatee ay cid kastaa huwaneyd magac Manfac iyo meeqaam ay xilkaasi kuqabatay aanay jirin.
Dagaalo sababay dhimashooyin iyo dhaawacyaba kadib Xalka degmada ee Dhinaca maamulka ayaa isugu soo biya shubtay in guud ahaan labadalo maamulkii horay uga jiray Degmada lana magacaabo maamul kayimaada labada dhinac ee iskuhayay Maamulidda Magaalada, iyo Shakhsiga Gudoomiyaha u noqonaayo oo laga madaxbanaaneeyey labada dhinac.
Yuusuf Maxamed Cabdulqaadir Kaanti ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan iyo dhinacyadii dagaalamayba ay kuwada qanceen inuu Gudoomiye ka noqdo Magaalada waxaana ilaa iyo maanta degmada ka shaqeeya Maamulka uu isagu gudoomiyaha kayahay oo ay ku daabanyihiin xubno kala matala Maamulka Jubba iyo calaamu’diinka Ahlusunna.
Magaalada tan iyo intii uu Gudoomiyaha Ka noqday Col yuusuf maxamed Cabdulqaadir “Kaanti’ waxay gashay Jawi siyaasadeed oo dagan dadkune waxay dareemeen in ay heleen Maamul ay ku ilaawi karaan kii Gudoomiye BARKUUS in uu Magaalada ka hanaqaaday.
Booqasho aan dhawaan ku tagay Magaalada ayaan ugu kuurgalay Xaaladaha Amni mida Nolaleed iyo tan ganacsi ee Magaalada kajira.
1, Xaga Amniga Baledxaawo waa mid la isku haleyn karo kamana jiro amni darro ka duwan midda kajirta guud ahaan Magaalooyinka laga saaray Shabaab ee ay Dowladdu hada kataliso.
2, Xaaladaha Nolaleed ee Degmada ayaa ah mid inbadan ka duwan sidii horay ay Magaaladu u aheyd ama aan sikale u dhahee sideey aheyd sanadihii lasoo dhaafay.
3, Xaga Ganacsiga ayaa isagune ah mid aad u bulaalay intii uu Col KAANTI Gudoomiyaha ka noqday Magaalada,isagoo heshiisyo ganacsi lagalay Maamulada Mandheera iyo Suufka oo labaduba aad loogu dhibaateyn jiray ganacsatada ree Baledxaawo ee u ganacsi iibgeyn jiray Magaalooyinkani.
Waxaana jirtay sanadkii hore dabayaaqadiisa in Kenya ay Xiratay Xuduuda ay alwadaagto Soomaaliya, gaar ahaan tan degmada Baledxaawo, waxyaabaha la xasuusto ee Xilligaasi dhacay ama uu talaabo ahaan u qaaday YUUSUF KAAN TI Aayaa waxaa kamid aheyd inuu isagune amar ku bixiyay in laxiro xuduuda baledxaawo iyo mandheera taas oo maamulayaasha mandheera ku qasabtay ineey wadahal la furan Maamulka baledxaawo kadib markeey Mudaharaadyo iyo diidmooyin qayaxan kala horyimaadeen Shacabka Mandheera oo uu saameeyey sicir barar aanay xamili Karin.
4, Dhinaca Maciishada ayaa Tusaalaha ugu sahlan een idiin lawadaagi karo uu yahay
“ Kiishka sonkorta ah markii uu kayimaado Magaalada Muqdisho oo lageeyo baledxaawo waxaa dukaamada iibiya tafaariiqda ay shacabka kaga iibiyaan loorkaas sonkorta ah $40 ilaa $45 Dollar, iyadoo ay xusid mudantahay in loorkaasi sonkorta ah Suufka iyo mandheere marka uu kaga yimaado caasimadahooda Nairobi iyo Addis ababa uu kajoogo qiimo laba jibaar ka badan kan baledxaawo uu kayahay waxayna taas sababtay in baahida dadka labadaasi degmo uu ka badnaado kan ree baledxaawo ay kahelaan degmooyinkani”.
Baledxaawo ayaa waxay kaheshaa Degmooyinka Mandheera iyo Suufka laba shayganacsi oo kala ah Baradhada cunada lagu karsado oo labadaasi dal kabaxdo iyo Qaarka ama jaadka oo isagune Magaalada ganacsi ahaan u yimaada mana jirto adeegyo ganacsi ookale oo ay baledxaawo kahesho Degmooyinkani , halka dhamaan adeegyada nolaleed ee kale oo bulsho ku u baahantahay ay kaqaataan baledxaawo.
Maamulka Korneyl Kaanti ayaa Magaalada ka hirgaliyay Canshuur qaadis lacagta kasoo xarootana ay toos ugu dhacdo Account uu ka furay Shirkadda Dahabshiil, Bilihi u horeeyeyba miisaaniyad dhaqaale oo lagu qiyaasay ku dhawaad hal milyan oo dollar ayaa ku dhacday accountigaas taas oo sida la iisheegay lagu maareeyo ilaa iyo hadda mushaarka ciidanka amniga ee Degmada,iyo laamaha kale ee Maamulka sidoo kale qarashaadkaasi canshuureed ayaa la itusay dhowr xarumood oo lagu dhisay sida Xarunta Hooyooyinka ee Degmada, Xarun loo dhisay ururka Dhalinyarada ee Degmada, Dayactir lagu sameeyey Xarunta Maamulka ee Degmada iyo Darbi gees ka gees uu u dhisay Saldhigga degmada Baledxaawo oo horay u ahaa kahor Maamulka Kaanti dhabbo haloosin ah oo mararka qaar laga fulin jiray mishinno diyaarsan ama ay sahlanaan jirtay in si fudud loola wareego lagana sii daayo maxaabiis sida horayba u dhacday.
Waxaa jira waxqabadyo kale oo ilmaqabato ah oo uu hirgaliyay Maamulka Degmada Baledxaawo oo mudan in lagu amaano, kartida iyo hawlqabadkaas muuqda ee uu mudadada sanadka iyo barka ah hirgaliyay Maamulka Magaalada Baledxaawo.
CAQABADAHA KU HORGUDBAN MAAMULKA DEGMADA BALEDXAAWO:-
Maamulkan shaqeynaya mudada ku siman sanad iyo barka ee ka arimiya baledxaawo ayaa waxaa ku horgudban inbadan oo shaqo ahne uu ka qabsan la’yahay Shakhsiyaad dano gaar ah ku qabay degmada oo aaminsan in maamulka uu ka hor istaagay waxyaabihii ay kaheli jireen iyo Labada Dowladeed ee Dariska nala ah oo iyagane u arka in meesha ay kabaxday Musuqii iyo wax isdaba marintii ay horay ugula shaqeyn jrieen Maamulo kahoreeyey Midka hadda jira.
SHAKHSIYAADKA UU MAAMULKA KA SHAQEYN LA’YAHAY :-
1, Cabdirahsiid Janan oo ahaa Wasiir Kuxigeenkii arimaha Gudaha ee Jubbaland hadane ah Siihayaha Xilkaasi, janan ayaa isu arka nin ay hoosyimaadaan Maamulada Degmooyinka Daawo la isku yiraahdo oo ah Baledxaawo, Doolow iyo Luuq, waxaana Markii uu Korneylkan degmada Maamulkeeda la wareegay uu muujiyay in degmooyinka Gobolka ay kala madax banaanyihiin kaliyana la hoostagi karo Xarunta Gobolka taas oo uu janan ka horyimid.
Isla janan ayaa Magaaladan ka hor istaagay in si rasmi ah loo furo Garoonkii diyaaradeed ee Degmadan Baledxaawo, oo uu horay u dhisay ganacsadihii caanka ahaa ee Cabdiqaadir Tindheer , waxaana uu cabdirashiid u arkaa furitaanka garoonka Diyaaradaha Baladxaawo caqabad markale soo wajaheysa degmada uu isagu xukumo ee Doolow oo uu u arko ineey dumeyso arintaas oo ah mid xaqiiiqo ah Bacdamaa dadka doolow kasoo daga kana duula 90% ay yihiin ree Baledxaawo.
2, Gudoomiyaha Gobolka gedo ee Maamulka Jubba Axmed Buule Canjeex ayaa isagune u arka madaxbanaanida uu muujiyay Yuusuf Kaanti ineey tahay mid meesha ka saareysa Midow indhasarcaad ah oo ay horay u sameyeen isaga , cabdirashiid janan iyo shakhsiyaad kale oo ay uga gol lahaayeen in xulafo siyaasadeed ay noqdaan Maamulada Sadexda Degmo arintaas oo uu markale kahoryimid Kornel Yuusuf Kaanti.
Gaba-gabada faalada aan sababeeyo sababta aan cinwanka Maqaalkeyga uga dhigay Baladxaawaa Barwaaqo iyo Baraaraba Baartay.
Ujeedada aan cinwanka ula baxay ayaa ah mid aan indhaheyga kusoo arkay taas oo aheyd markaan meelo badan kasoo eegay Magaalada , Maamulkeeda oo ah mid ay bulshadu ku wada qanacsanyihiin, jeclaan lahaayeene inuu xukumo sanadaha soo aadan iyo ugu danbeyntii oo ah Maamulka Magaalada oo mudan in la dhiiragaliyo, sidaas si lamid ahne shacabku ay ku fara adeygaan Maamulka Go’aan qaadashada ku haboon ee Magaalada xukumayay mudada yar waxna kabadalay taariikhdii madoobeyd ee baledxaawo u gashay Sooyaal oo hada uu muuqdo isbadalkeeda.
Sadarka ugu danbeeya ee qoraalkeygane waxaan jeclaan lahaa inaan Amaan, mahadnaq iyo siiwadida hawlaha shaqo ee uu haayo aan ku dhiiragliyo Gudoomiyaha Rugcadaaga ah ee Magaalada Mudada yar waxbadan kaga badalay ee Korneyl Yuusuf Maxamed Cabdulqaadir “Kaanti” Waxaana leeyahay Mudane Mahadsanid shaqo wacan ayaad qabatay oo ree Baledxaawo iyo ree Gedo iyo ree Jubalandba ay kugu xasuusan Doonaan.
M Shaafici Cabdinuur
Ciidanka Amaanka ee Turkiga oo Xiray qof looga shakisanyahay inuu ku luglahaa Weerarkii Paris
Top News Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ansixisay weerar ka dhan ah Daacish
Dilal Ka Dhacay Magalada Madaxweyne Farmaajo Ku Sugan Yahay Ee Dhuusamareeb.
admin 27th February 2020
TOP NEWS: Dhageyso Puntland oo u Muuqata in ay Xooga ka so dabacday Moowqfikeeda Diidmada ah ee 4.5
admin 30th March 2016